अन्तत समलिंगी जोडीले १ वर्षपछि यसरी पाए भिसा !
फागुन १२, २०७४ BNNTV
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एक समलिंगी जोडीले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा गैर पर्यटकीय भिसा पाएका छन् ।
अध्यागमन विभागले समलिंगी विवाह गरेकी कञ्चनपुर घर भई भक्तपुर अनन्तलिंगेश्वर बस्ने सुमन पन्त र अमेरिकी युवती लेस्ली लुइक मेल्निकलाई शुक्रबार ६ महिनाको गैरपर्यटकीय भिसा दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा खबर छ । भिसा लिन दुवै जना शुक्रबार अपराह्न अध्यागमन विभाग पुगेका थिए । सुमन र अमेरिकी नागरिक लुइकले २०१५ डिसेम्बर १८ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेका थिए ।
अध्यागमनले भिसा दरखास्त फारममा पति वा पत्नी उल्लेख भएकाले समलिंगी जोडीलाई भिसा दिन नमिल्ने भनेको थियो । त्यसपछि उनीहरू न्यायका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । लेस्लीले नेपालमा सुमनसँगै बस्न गैरपर्यटकीय अन्तर्गतको म्यारिज भिसाका लागि सन् २०१६ डिसेम्बर २९ अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएकी थिइन् । भिसा लिने प्रक्रियामा गरिने सनाखतमा पति÷पत्नी शब्द प्रयोग नगरी अंग्रेजी भाषमा ‘स्पाउस’ शब्द प्रयोग गरिएको छ। सर्वोच्चको आदेशबमोजिम नै उनीहरूले भिसा पाएका हुन् ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक कोषहरि निरौलाले गत कात्तिकको सर्वोच्चको आदेशबमोजिम पन्त र मेल्निकीलाई भिसा दिइएको बताए। निर्देशक निरौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उनीहरूलाई पहिलो पटकलाई ६ महिनाको भिसा दिएका छौं ।’
उनीहरूले भिसाका लागि अमेरिकामा दर्ता भएको विवाह प्रमाणपत्र, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दिएको प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेस गरेका थिए। भिसा पाइसकेपछि उनीहरू निकै हर्षित मुद्रामा देखिन्थे ।
प्रकाशित : शनिबार, फागुन १२, २०७४१३:०६
‘मधेसीलाई सत्तामा ल्याउनु यसकारण पनि गलत’
कमल थापालाई लाग्यो दह्रो झड्का : पूर्वप्रधानमन्त्रीका छोरासहित १४ केन्द्रीय नेताले छाडे पार्टी
नौ महिनामा दुई दर्जन बलात्कृत, ‘बेइज्जत हुने’ भन्दै घटना लुकाउन हुन्छ ‘मिलेमतो’
यी प्रमुख ४ राष्ट्रिय दलले डेढ करोड जरिमाना तिर्नुपर्ने ! सबैभन्दा बढी राजपाको भागमा
गुटको सल्लाहमा चले देउवा
किन गरे ज्ञानेन्द्रले आदित्यनाथसँग वार्ता ?
करोडौँको कोष बनाउँदै नेकपा
टस जितेर दिल्लीले ब्याटिङ रोज्यो ! सन्दिप टोलिमा अटाएकी अटाएनन् ? यस्तो छ प्लेइङ ११ !
लोभ देखाएर हिन्दूलाई क्रिश्चियन बनाउने काम भइरहेको छ, कारवाही हुन्छ – माधव नेपाल !
काडमाडाैं सफा-चट बनाउन ब्रुमार ! यी स्थानमा प्रयोग हुने ! हेर्नुहोस कहाँ-कहाँ !
“सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस विकास विरोधी”
युरोप छिर्न आप्रवासीले प्रयोग गरेको डुङ्गा पल्टियो ! एक बालकसहित चार जना आप्रवासीको मृत्यु !
ट्रक र बस एकापसमा ठोक्किँदा १५ जना घाइते ! २ को अवस्था गम्भीर !
धोनीको चेन्नईसँग खेल्दै दिल्ली, सन्दीपको सम्भावना कस्तो ?
अब ट्रायल पास भएपछि अत्यावश्यक भएमा २४ घण्टामै लाइसेन्स दिईने !
चैत १६ गते नेपाल बन्द, प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने विप्लवको चेतावनी
२२ घण्टा अगाडि BNNTV
सडक खन्दै गरेको डोजर भिरबाट खस्दा २१ वर्षीय अप्रेटरको मृत्यु !